I-12 / 02 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: NgoFebhuwari 12, 2020
Abasebenzi bakaHulumeni okufanele baqashwe kumayunithi wenkonzo woMnyango Wezempilo enhlanganweni yesifundazwe ngaphansi kwesigaba 657 soMthetho we-Civil servants Law Nombolo 4 (B) kanye ne-Article 663 / A yoMthetho Wokunqunyelwa Nombolo 45. [Okuningi ...]
UMongameli we-ETO uMetin Güler ukugcizelele ukuthi ubulungiswa bezitimela kanye nengqungquthela ezobanjelwa edolobheni lethu ngo-Ephreli kuzoba negalelo emandleni wokuncintisana ka-Eskişehir kanye nokukhuthaza isigaba sezinhlangano zezitimela emhlabeni jikelele. Umbhalo we-Eskişehir Chamber of Commerce [Okuningi ...]
UMongameli Wezokuhamba Nezitimela Abasebenzi bezokuThutha nezitimela, u-Abdullah Peker, enye yezindawo eziqashwe kakhulu kwaSivas, uzoba njengeSivas Demir Çelik, eyavalwa eminyakeni edlule futhi ayisebenzi. [Okuningi ...]
IMeya ye-Ankara Metropolitan uMansur Yavaş umemezele ukuthi basebenzela kulayini kamasipala omusha ozodlula eMamak. Ngenkathi umugqa omusha ozofinyelela empumalanga yenhlokodolobha uhlelelwe ukuba yizindawo eziyisithupha, usesha izinsiza zephrojekthi ziqalisiwe. entsha [Okuningi ...]
Abasebenzi bakwaMetro basindise le nja, eyadonswa yisihlahla sayo emanzini. Umnikazi wale nja, uFatma Kamuran Koç, uhambele ababekhona esiteshini nenja yakhe. IKadıköy - ITavsantepe Metro Line esiteshini saseKadikoy [Okuningi ...]
INkantolo Yomthethosisekelo (AYM) yasichitha ngamabomu isicelo sokumisa lesi sikhulu, yaxoxa ngezicelo zenhlalo weqembu likaCumhuriyet Halk Party (CHP) u-Ergin Altay, Özgür Özel no-Engin Özkoç kanye namaphini angama-139 eKanal Istanbul. [Okuningi ...]
ÇerkezköyUmhlangano wokuhlola ubanjwe ngaphansi kobuholi beMeya yethu uVahap Akay ngenhloso yokunquma izinkinga zokuhamba ezingahle zenzeke edolobheni lethu futhi nokuxazululwa kwalezi zinkinga ngomugqa weSitimela Esiphezulu ozodlula. okusezingeni eliphezulu [Okuningi ...]
Ephendula umbuzo wePhini lika-CHP Istanbul iPhini likaMahmut Tanal, uNgqongqoshe WezokuThutha, uMehmet Cahit Turhan, uthe bayi-6 abasebenzi abaxoshwe emisebenzini yomphakathi kwathi oyedwa kubo wagwetshwa inhlawulo yenyanga yenkohliso kwi-TCDD. [Okuningi ...]
IMeya yaseSivas uHilmi Bilgin uhlangane nezinduna zomakhelwane emhlanganweni wokubonisana. Emhlanganweni obubanjelwe eHot Çermik Sefa Hotel, ngaphandle kukaMongameli Bilgin, amaPhini kaMongameli, uMongameli weMuhtars Association, uCemalettin Arslan. [Okuningi ...]
I-TCDD yesiFunda sesi-5 iyaqhubeka nokutshalwa kwezimali kwayo emisebenzini ebhekene nayo. Kwabikwa yiRegional Directorate ukuthi imali eyi-2019 million 21 TL yatshalwa kumaphrojekthi angama-87 ngonyaka ka-600. 2 Amaphrojekthi eMalatya [Okuningi ...]
U-Otoyol Yatırım AŞ, obesebenza ngokusetshenziswa komgwaqo omkhulu waseGebze-İzmir, obekuxoxwa ngawo kabanzi, ngezindleko zokubuya phakathi kwe-Istanbul ne-Izmir ngezimoto ngesikhathi sokuvulwa kwayo, bekungamazwe jikelele ukuthengiswa kwamasheya angabakhona. [Okuningi ...]
Uma ufuna ukukhulisa ama-akhawunti wakho wokuxhumana nabantu kepha abalandeli bakho bangakhuphuki, https://takipciodasi.com/ Ungamemezela i-akhawunti yakho ye-Instagram kubantu abaningi ngokuvakashela iwebhusayithi, ngokusebenzisa amabhonasi nsuku zonke nezinsizakalo ezengeziwe ngehora. Namuhla, [Okuningi ...]